विराजले ८ लाख सहयोग गर्ने ! «
विराजले ८ लाख सहयोग गर्ने !
Published : 17 April, 2020 10:08 pm
केही दिनदेखि सामाजिक संजालमा नायक विराज भट्ट छाइरहेका छन् । लकडाउनको समयमा दैनिक काम गरेर गुजारा गर्नेहरुलाई विराजले ८ लाख सहयोग गर्ने भन्दै विभिन्न समचारहरु आइरहेका थिए । तर, विराज आफैँले भने उक्त कुरा घोषणा गरेका थिएनन् ।
यस्तैमा, नायक विराजले त्यो अपवाह मात्र भएको बोलेका छन् । कुराकानीको क्रममा उनले भने, ‘मैले सहयोग गर्छु भनेर अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक घोषणा गरेको छैन । सामाजिक संजालमा मैले ८ लाख सहयोग गर्ने भनेर आएको समचार गलत हो ।’
कोही अपरिचित व्यक्तिले अपवाह मात्र फैलाएको विराजले बताए । विराज अहिले सहयोग गरिहाल्ने सोचमा छैनन् ।
समस्यामा परेका मजदुर तथा चलचित्र प्रविधिकहरुलाई चलचित्रकर्मीहरुले सहयोगको हात अगाडि बढाइरहेका छन् । पल शाह, पूजा शर्मा, वर्षा राउत, दीपकराज गिरी, वर्षा सिवाकोटी, करिश्मा मानन्धर लगायतका चलचित्रकर्मीले सहयोगको हात अगाडि बढाइसकेका छन् ।